WordPress: Tema sy Plugins tsara indrindra amin'ny 2019 | Avy amin'ny Linux
WordPress: Tema sy Plugins an'ny 2019
WordPress: Tema sy Plugins tsara indrindra amin'ny taona 2019
Iray amin'ireo antony itiavan'ny olona azy ny WordPress CMS (WP) ary manjaka io iray amin'ny toerana voalohany ao amin'ny lisitry ny CMS tsara indrindra ankehitriny, dia satria azo namboarina tanteraka.
Izany indrindra, misaotra ny fanampiana nomeny amin'ny fampiasana lohahevitra (lohahevitra) sy add-on (plugins) fananan'ny vondrom-piarahamonina na antoko fahatelo. Ireo zavatra roa ireo dia nasongadina tao amin'ny voalohany y faharoa mandefa momba ny WP.
Na dia ho an'ireo manana mpizara tranonkala miaraka amin'i WP aza dia mamorona mora foana sy haingana ireo tranonkalanao mahagaga, mampiasa ny katalaogin'ny lohahevitra sy plugins saika tsy voafetra, Tsy zavatra misy olana izany, ny fampiasana ireo additives ireo ho an'izay manana azy tranokala fampiantranoana WordPress.com eny hatramin'ny vao haingana.
Androany ity sehatra famoahana tranonkala an-tserasera ity dia efa nanohana fanampiana amina lohahevitra an'arivony sy plugins an'ny antoko fahatelo (maimaimpoana sy karama), ao amin'ny drafitra karamany sasany. Ary amin'ity lahatsoratra ity dia manantena izahay fa hanolotra torolàlana fohy ho an'ny tsara indrindra na malaza indrindra ampiasaina amin'ny fahafinaretana sy fiheverana ny tsirairay.
Alohan'ny hampisehoana ny lohahevitra sy plugins malaza indrindra, malaza, vao haingana indrindra, maimaimpoana sy karama, na eo amin'ny sehatra WP, tsara ny mazava fa Theme sy Plugin ao anatin'ity sehatra famoahana tranonkala be mpampiasa sy be mpampiasa ity.
1 Inona no atao hoe Lohahevitra?
2 Inona no atao hoe Plugin?
2.1 Drafitra ifotony
2.2 Drafitra Premium
2.3 Drafitra fandraharahana
3 Misongadina, malaza ary vao haingana
3.1.1 tsara indrindra
3.1.3 vao haingana
3.1.5 Isan-karazany miaraka amin'ny fanamarihana manokana
3.2.1 tsara indrindra
3.2.4 Fampivoarana beta
3.2.5 Isan-karazany miaraka amin'ny fanamarihana manokana
Inona no atao hoe Lohahevitra?
Ny lohahevitra ao anatin'ny rindrambaiko rehetra dia heverina ho a karazana singa manan-danja mifandraika amin'ny endrika famolavolana estetika sy voafaritra voafaritra, izay amin'ny ankapobeny dia manome endrika hita maso sy fiasa manokana, izay avy eo, dia matetika mifandraika amin'ny endrika marika amin'ny vokatra iray.
Ao anatin'ny WP, ny lohahevitra iray dia azo faritana ho:
Andiana rakitra misy kaody mamela ny fanovana ny fisehoan'ny pejin-tranonkala sy bilaogy. Izany hoe, izy ireo dia singa tafiditra ao anatin'ny fitaovan'ny pejy web, izay mandrafitra ny fototr'izany ary manamarika ny fandaminana sy ny endrik'ireo singa ao anatinao, avy amin'ny endritsoratra an-tsoratra an'ireo soratra, ny habeny manomboka amin'ny litera na ny loko, hatrany amin'ny sary any ambadika, ny rohy hyperlink na ireo widget hafa izay mandrafitra ny hatsarana ankapobeny.
Ny fampiasana lohahevitra mety amin'ny tranokalantsika dia mety mahasoa sy / na manararaotra noho ireto antony manaraka ireto hodinihina:
Matetika napetraka haingana sy mora izy ireo ao anatin'ny minitra vitsy.
Matetika izy ireo dia tsy mitaky fiheverana momba ny fananganana programa na web fampandrosoana.
Avelan'izy ireo hampifanaraka ny estetika amin'ny tetik'asa web amin'ny sehatry ny tsena na mpamaky, mitovy lohahevitra amin'izany.
Manamora ny fanamafisana ny lafiny ilaina amin'ny maso izy ireo, toy ny singa haino aman-jery, ny famolavolana minimalista ary ny fidirana amin'ireo tambajotra sosialy.
Avelany hifanaraka haingana amin'ny Responsive Design ireo tetikasan'ny tranonkalantsika, mba hahitana azy ireo tsara amin'ny karazana fitaovana rehetra.
Avelany hampiasa widgets izay manamora ny fandaminana ny firafitra sy ny fandaminana ireo fizarana ao amin'ny tetik'asa web.
Raha fintinina, ny fisafidianana sy fampiasana ny lohahevitra WP mety indrindra dia manampy amin'ny fikolokoloana ny hatsarana amin'ny tetikasa tranonkala rehetra ary manome fahatsapana fahitana tsara ho an'ireo mpitsidika, mpampiasa, mpikambana ary mpanjifanay mety ho azo adika, azo adika amin'ny fotoana mety amin'ny orinasa.
Na izany aza, tokony hitandrina isika hampiasa lohahevitra feno fampiasa fanampiny na be loatra, satria tsy maintsy rakotry ny plugins ireo, satria ny fampifangaroana ny endrika hita maso sy ny fiasa ao anaty lohahevitra iray dia mety hanery antsika hanambady an'io lohahevitra manokana io mandritra ny fotoana maharitra.
Inona no atao hoe Plugin?
Antsoina koa hoe plugins, amin'ny teny ankapobeny ny plugin dia tsy inona fa ny a sombiny na singa amin'ny kaody natao hanitarana ny asan'ny programa na fitaovana. Raha atao teny hafa, dia mamela SW iray hanana fahafaha-manao maro hafa amin'ny alàlan'ny fampidirana asa bebe kokoa.
Arak'izany, arakaraka ny ampiana add-ons no hanampiana ireo mpampiasa mampiasa azy io, tsy mila SW hafa ivelany hanatanteraka ireo voalaza miasa na asa ireo. Izay fomba tsara hampivondronana azy rehetra amin'ny toerana iray.
Ny tanjon'ny plugin afa-tsy manitatra ny fotodrafitrasa na ny asan'ny SW, dia izany manamora ny asan'ireo izay mitodika any aminy, satria ireo dia tsy maintsy manafaingana ny asa ary, miaraka amin'izay, manolotra ny kalitaon'ny asa ilaina hanatanterahana ireo andraikitra nankinina, ka hisorohana ny fametrahana programa hafa.
Ao anatin'ny WP, ny plugin dia azo faritana hoe:
Sombiny kaody tsotra na sarotra (mini-program) izay mampitombo ny fiasa sy ny toetran'ny tetikasanay web ary manatsara ny WordPress amin'ny lafiny rehetra.
Ireo fampiasa sy toetra mampiavaka azy ireo dia matetika:
Sorohy ny spam
Vokatra varotra (e-Varotra)
Ampidino ho azy ny sary
Hatsarao ny pejin'ny pejinay
Hatsarao ny endrika
Tantano ny statistika
Manaova marketing amin'ny mailaka
Tantano ireo tambajotra sosialy
Hatsarao ny fifamoivoizana sy ny fivezivezena amin'ny Internet
Anisan'ireo maro hafa, satria lehibe tokoa ny karazany ary tsy misy farany ny azo atao. Na dia ho an'ireo izay mampiasa aza WordPress.com, hoy ny sehatra mandeha ho azy manarona ireto fiasa manaraka ireto amin'ny alàlan'ny plugins default, miankina amin'ny drafitra voafantina:
Statistika WordPress.com (Google Analytics Version)
Tena ilaina SEO (Search Engine Optimization)
Fanadihadiana momba ny fiarovana
Galeria mandroso (mozika, fampisehoana, ankoatra ny hafa.)
Tambajotra sosialy (bokotra media sosialy amin'ny lahatsoratra sy pejy)
Form Builder (Form Forme contact)
Widget nitarina (toy ny Flickr, Eventbrite, Google Calendar, Twitter, sns.)
Akismet (fiarovana anti-spam mandroso)
Backup sy fanondranana
Kaody fohy nitarina (Lahatsary, feo, ankoatry ny hafa.)
Horonan-taratasy tsy manam-petra
Famandrihana mailaka (bokotra manaraka)
Fanehoan-kevitra mandroso (Toy ny safidy amin'ny fanehoan-kevitra, fanonona ny mpampiasa, fampandrenesana sns.)
Safidy toa (Ao amin'ny lahatsoratra)
Insertions (Avy amin'ny Facebook, Twitter, Instagram, ankoatry ny hafa.)
Custom Design (endritsoratra manokana, CSS Editor, ankoatry ny hafa.)
Misongadina, malaza ary vao haingana
Firy ny temotra sy ny plugins azo ampiasaina amin'ny tranokala WP rehetra hanonona ny 3 isaky ny sokajy izahay ary hanao fanonona manokana manompo toy ny famakiana sy torolàlana momba ny fikarohana ho an'iza.
Sivy ambin'ny folo sivy ambin'ny folo
Fito ambin'ny folo amby roapolo
Isan-karazany miaraka amin'ny fanamarihana manokana
Fiteny tiana kokoa
Smush Image Comprenssion sy Optimization
W3 cache tanteraka
Visual Composer (WPBakery Page Builder ho an'ny WordPress)
Fampahalalana momba ny lalàna momba ny cookie (Consigne Cookie GDPR)
Tena SSL tsotra
Araka ny hitantsika, ny WordPress amin'ny endriny ifotony, izany hoe alaina sy apetraka amin'ny endrika fampiharana ho an'ny asa mivantana amin'ireo mpizara na amin'ny endrika mandroso, izany hoe ny asa an-tserasera amin'ny alàlan'ny WordPress.com dia sehatra famoahana tranonkala iray tena tsara izay mamela antsika tsy hivoatra amin'ny tranokala tsotra fotsiny ka amin'ny tetik'asa tranonkala maoderina sy sarotra.
Ho fanampin'ny famelana antsika hanatsara ny fivoarany amin'ny alàlan'ny fampiasana lohahevitra sy plugins izay mampiditra infinities ny endri-javatra sy Functional fanampiny mendrika ny misy tranonkala sy tetikasa tranonkala an'ny fikambanana lehibe, na ho an'ny daholobe na tsy miankina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » WordPress: Tema sy Plugins an'ny 2019
GitHub Service Package Registry serivisy mifanaraka amin'ny NPM, Docker, Maven, NuGet ary RubyGems
Divay 4.8: inona no vaovao ao amin'ny kinova vaovao amin'ny fisie mifanentana